Amanqaku kaChris Rothstein malunga Martech Zone |
Amanqaku ngu UChris Rothstein
UChris Rothstein yi-CEO kunye nomseki-kunye we Groove.co, iqonga lokuzibandakanya kwintengiso. Phambi kweGroove.co, uChris wayakha, akala kwaye alawula amaqela okuthengisa amashishini kuGoogle. Ngoku unceda ukuzisa itekhnoloji yale mihla kwihlabathi lentengiso ukuze wonke umntu asuse kwiintengiso kubalawuli bezentengiso angachitha ixesha elininzi ebonelela ngexabiso kubathengi nakwiinkampani zabo.
Isicwangciso sokuthengisa esisekwe kwiAkhawunti lixesha elizayo, kwaye iGroove ilapha kuyo
NgoLwesithathu, ngoFebruwari 7, 2018 NgoLwesithathu, ngoFebruwari 7, 2018 UChris Rothstein
Xa kuziwa kwintengiso yesoftware ye-SaaS, ukujolisa kubantu abathile akuyiyo imodeli yokusebenza kakuhle. Emva kwayo yonke loo nto, i-avareji yabantu be-5.4 bayabandakanyeka kwisigqibo sokuthengisa seshishini elinye. Ngenxa yokuba ukuvavanywa okusekwe kwiqela kuyinto eqhelekileyo, ukuthengisa okusekwe kwiakhawunti (ABS) kunemveliso ngakumbi kunokujolisa kukhokelo oluthile. Indlela esekwe kwiakhawunti yokuthengisa, nangona kunjalo, inokudla ixesha. Ukulandelela ubunzulu beemetriki kunye namaxesha kwiithagethi ezininzi, kunye nokusebenzisana kolo lwazi kumaqela angaphakathi,